Salaamanews » Caafimaadka
Home » Caafimaadka, Warar
Waa sidee caafimaadka Xoolaha ku nool Shabeellaha-dhexe
(Salaamanews)-Olole xoolaha nool gaar ahaan ariga looga tallaalayo cudurka agmarka ariga ayaa lagu wadaa in berri uu ka billowdo magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha dhexe iyo deegaanno hoos taga.
Hay’adda cunnada iyo beeraha ee FAO (Food and Agriculture Organization) ayaa bixinaysa dawada tallaalka. Tallaalka oo lacag la’aan ah waa kii ugu horreeyay oo noociisa ah.
Kulan looga hadlayay... Tags: caafimaadka, warar Madaxweyne Maxamuud oo daaha ka rogay tallaalka carruurta Soomaalida
(Salaamanews)-Madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta daah-rogay olole carruurta looga tallaalayo cudurrada dilaaga ah, kaas oo la qorsheynayo in laga sameeyo guud ahaan gobollada dalka.
Xaflad ay soo qaban qaabisay wasaaradda adeegga bulshada ayaa madaxweyne Xasan wuxuu afka uga dhibciyay tallaalka cudurrada dilaaga ah carruur yar yar oo ku sugan Muqdisho.
Madaxweynaha ayaa... Tags: caafimaadka, warar Xanuunka Shuban biyoodka oo laga dabar jaray xabsiga dhexe ee Xamar
(Salaamanews)-Wasaaradda garsoorka, awqaafta iyo arrimaha diinta ee xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegtay in lagu guuleystay dabarjarka cudurka shubanka oo toddobaadyo ka hor ka dillaacay xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho, kaas oo ay u dhinteen dhowr qof oo maxaabiis ahayd.
Kulan maanta ka dhacay xarunta xabsiga oo lagu muujinayay in uu cudurka ka dhammaaday xabsiga ayaa waxaa ka soo qeyb galay mas’uuliyiin... Tags: caafimaadka, warar Maalinta caafimaadka aduunka oo laga xusay dunida oo dhan
Hay’adda caafimaadka adduunka ayaa sanadkan u asteysey in si gaar ah loo xuso aamusanaha dadka laaya ee ah sare u kaca cadaadiska dhiiga ama dhiig... Tags: caafimaadka, dhaqanka, warar Cisbitaalka dowladda oo dib u furmay 22-sano kadib
(Salaamanews)-Issbitaalka xoogga ee magaalada Muqdisho oo dayactir lagu sameeyay muddo 22 sano ah kaddib ayaa dib u billaabay adeegyadii uu u qaban jiray ciidamada xoogga dalka Soomaaliya, sida ay sheegeen saraakiisha ibitaalka.
Agaasimaha isbitaalka xoogga gaashaanle sare Cabdulqaadir Muuse Cismaan ayaa warbaahinta afka dowladda ku hadasha u sheegay in qayb ka mid ah isbitaalka uu hadda shaqo billaabay.
Wuxuu... Tags: caafimaadka, warar Waxaa leysku khilaafay heerka uu gaadhsiisanyahay cudurka Shuban-biyoodka oo ka dillaacay Hiiraan
(Salaamanews)-Dr. Cabdi Waaber Geeddi oo ka tirsan dhaqaatiirta ciidamada Djibouti ee howlgalka Midowga Afrika ka ayaa sheegay in cudurka oo toddobaadyadii ugu dambeeyay ka jiray loo haystay inuu shuban-biyood ahaa, balse tijaabo la qaaday oo lagu soo baaray Nairobi lagu ogaaday inuu yahay daacuunka.
Dhaqtarka wuxuu sheegay in cudurka uu ka dhashay nadaafad-xumo ay keentay fatahaadda wabiga uu ka sameeyay... Tags: caafimaadka, warar Hiiraan: Kooxda al-Shabaab oo dhaqaatiir sii deysay
Dhakhaatiirta oo markii hore ka tagay magaalada Beledweyne ayay maleeshiyadu ku eedeysay inay la shaqeeyaan hay’adaha samafalka oo ay horay u mamnuucday,... Tags: caafimaadka, warar Hey’ad indha fiiqis 500 oo qof uga sameysay gobolka Hiiraan
Mid ka mid ah saraakiisha hay’adda oo magaciisa lagu soo koobay Cabdifataax ayaa sheegay in howsha qalliinka ay ku eg tahay... Tags: caafimaadka, warar Dawooyinka waqtigooda dhacay oo laga isticmaalo Soomaaliya
Dr. Yuusuf Axmed maalin, oo ah dhaqtar ku takhasusay cilmiga Chemistry-ga oo dhawaan tagay Soomaaliya ayaa markuu ku... Tags: caafimaadka, warar Dhaqtar Soomaali ah oo Muqdisho jooga ayaa in uu helay dawada cudurka HIV/AIDS
(Salaamanews)-Mid kamid ah dhaqaatiirta Soomaaliyeed oo muddo ka shaqeynayay howlaha caafimaadka ayaa sheegay inuu dadaal iyo juhdi badan kadib ilaahay tusay dawada cudurka dilaaga ah eek a hortag mooyee dawadiisa dunidu ay ka daashay HIV/Aids.
Dr Sheekh Yuusuf Suudaani, oo muddo ka shaqeynayay howlaha caafimaad xarun dadka xanuunsan lagu daweeyo ku leh Muqdisho, ayaa shaaciyay inuu ogaaday dawada... Tags: caafimaadka, warar Next »	Soo Dhaweenta Faqi Bashir Abdulle Osman MPLS MN	Daawo muuqaallo kale	Maqaallo »